Waaheen Media Group » Yuhuuda iyo argagixisada
Browse:Home Articles Yuhuuda iyo argagixisada
Published by Waaheen Media on July 14, 2017 | Comments Off on Yuhuuda iyo argagixisada
Waddamada reer galbeedka oo u badan kiristaan waxa qaraxyo ku naafeeyey muslimiin xagjir ah kuwaas oo markii hore dalalkaasi soo dhoweeyeen oo ugu deeqeen nolol dhinac walba ka dheeli tiran . Dunida reer galbeedka oo ay ku sii kordhayaan dhibaatooyinka ay maleegayaan xagjiriintu ayaa dadka qaar oo wax falanqeeyaa ku sababeeyaan in ay jawaab u tahay faragelinta dalalkaasi ku hayaan waddamada muslimiinta .
Hadaba waddanka israaiil oo yuhuudu ku dhistay qaab gacan ku rimis ah 1948 kuna yaalla meel khatar badan oo amnigeeda aan la isku halayn karin argagixisadu weli kama geysan qarax iyo wax la mid ah marka laga yimaado colaada falastiin iyo israaiil.waxana loo aanaynayaa in aan waddanka israail aanay joogin muslimiin wax rabshi kara oo ay yuhuudu iska xidhay in ay waddanka soo galaan.
Hadaba ma la odhan karaa dhibaatada reer galbeedka ka soo gaadhaysa muslimiinta mintidka ah waa mid ay iyagu gacmohooda ku samaysteen ? oo hadii aanay muslimiinta u ogolaan in ay waddankooda soo galaan dhibkan lama kulmeen ? sidee ayaase ugu haboon in loo xakameeyo rabshaha ay geysanayaan kuwa maanka laga dooriyey ee xasuuqaya bulshooyinka aan waxba galabsan?